muscleprofessor: October 2015arial" action="like" colorscheme="light">
Fitness ၊အအိပ်နှင့် ကျားစွမ်းရည်
လူတစ်ယောက် ကျန်းမာသန်စွမ်းလိုလျင် အပျော်အပါးရှောင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ အအိပ်အစား ဂရုစိုက် စသည့် အကြံပြုချက် တွေကိုလူတိုင်း ကြားသိ၊လိုက်နာ နေကြသော်လည်း၊ ထိုလူတိုင်း တကယ် ကျန်းမာ သန်စွမ်းကြပါရဲ့ လား။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ငါးဆယ်က အားကစားခန်းမ ဂျင်မ်ဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားလှသော်လည်းထိုခေတ်ကလူများ ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျန်းမာသန်စွမ်း ခဲ့ကြသလောက် ယခုခေတ် ရပ်ကွက်တိုင်း လိုလိုမှာအားကစား လေ့ကျင့်ရေးခန်းမ တွေပေါများနေ သော်လည်း ယနေ့ ခေတ် မျိုးဆက်များ ဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့တကယ်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်း ကြပါသလား။လွန်ခဲ့သော နှစ်ငါးဆယ်က အာဟာရ စနစ်တကျရွေးချယ်စားသောက် ရမည့်အသိပညာ ဗဟုသုတ အားနည်းသော်လည်း ထိုခေတ်က အ၀လွန်သူဆို ၍ရှားမှရှားပင် မဟုတ်ပါလား။ရောဂါဆိုးများ ဆိုတာ ဝေလာဝေး ပင်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ ခေတ် အဖက်ဖက်ကတိုးတက်လှပါပြီဆိုသော ကျွန်တော်တို့ ခေတ်တွင်မှ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးချိုးတစ်ချိုးလောက်က ဆီးချို သွေးချို
နှလုံးရောဂါ ကင်ဆာ ပန်းသေ၊ပန်းညှိုးနှင့် အ၀လွန်ခြင်းတွေက အလူးအလဲဖိစီး နှိပ်စက်နေ ခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ကျယ်ပြန့် လွန်းသော အကြောင်းအရာများကို ဤဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် နှင့်ဆွေးနွေး၍ မရနိုင်သော်လည်းကျွန်တော်တို့ အကျွမ်းဝင်နေသောfitness နှင့်ပါတ်သက်တာလေး တွေကိုတော့ ဆွေးနွေး
ကျွန်တော်တို့ လို fitness crazy တွေကတော့ သန်ပြီးရင်းသန် စွမ်းပြီးရင်းစွမ်း ချင်ကြတာ သဘာဝပါ။ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက် ကျန်းမာသန်စွမ်း မှုကိုဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါသလဲ။တိုးတက် ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ တွင်တော့ heart rate variability(HRV)monitoring နှင့်လစဉ် သွေးဖေါက်စစ်ဆေးခြင်း
များဖြင့် တိုင်းထွာ နိုင်သော်လည်း ကျွန်တေ်ာတို့ နိုင်ငံ၊ကျွန်တော်တို့ အနေအထားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်
လုံးဝမရှိသည့် တိုင်းတာနည်း တစ်ခုကို ဆွေးနွေးတင်ပြ ပေးပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ ယောက်ကျားတွေရဲ့သန်စွမ်းမှုကို စစ်ဆေးဖို့ ကိရိယာတွေ သိပ်များများစားစား မလိုအပ်
ပါဘူး။လိင်မှုကိစ္စ၊ မျိုးဆက်ပြန့် ပွားရေးသာမက ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို မှတ်ကျောက် တင်ပေးနိုင်သော
ဘုရားပေးသော သာမိုမီတာ ရှိနေခြင်းပါပဲ။ လိင်စိတ်ကြွလာပြီဆိုရင် ဦးနှောက်အရှေ့ ပိုင်းရှိ nucleus accumbens က၊ကိုယ်တွင်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်၊ ဇီဝဓါတုဖြစ်စဉ်တွေဟာ ပုံမှန်ရှိနေမယ် ဆိုရင် သာမိုမီတာ
ကိုကောင်းကောင်းကြီး အကြိမ်ကြိမ် ထကြွ သန်မာစေဖို့ အလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။(၁)။
နောက်တစ်ချက်က ညအိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်ပြီးနောက် မနက်အိပ်ရာထချိန် သာမိုမီတာ ထောင်မတ်နိုင်
စွမ်းနှင့်လည်း ကျန်းမာသန်စွမ်း မှုကိုတိုင်းတာ နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကိုတော့ sleep-related erection (SRE)
SRE ဟာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နိုင်မှု ကိုတိုင်းတာတဲ့ rapid eye movement (REM) နှင့်လည်း
သက်ဆိုင်ပါတယ်။(၃)ဒါကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသားများမှာ မနက်စောစော သာမိုမီတာ ထောင်မတ်နိုင်စွမ်းက သူ့ ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဟိုမုန်းပမာဏ ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်ခြင်းက အမျိုးသားတွေအတွက် တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လွှတ်မှု အတွက်
အကောင်းဆုံးပါပဲ။(၄)ကိုယ်တွင်းမှာ တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးလာပြီဆိုရင် မနက်စောစော
သာမိုမီတာ ထောင်မတ်နိုင်မှုတွေ နည်းပါးလာတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။(၅၊၆)
အကယ်၍ သင်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် ပြုလုပ်သော်လည်း မနက်စောစော သာမိုမီတာ ထောင်မတ်မှု
မကြာခဏ မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်သည့်ပမာဏနှင့် အနားယူပြန်လည် အားပြည့်သော
အတိုင်းအတာကို ပြန်လည် ချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်နေ ပါပြီဆိုတာ သတိပြုပါ။မိမိကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားကို ပြုပြင်
ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ရမှာ မှန်သော်လည်း hardcore ဆိုတဲ့ ပေါ်ပြူ
လာစကားလေး တစ်ခွန်းအတွက် သင့်ရဲ့ နာလံထ အားပြည့်သည့်စနစ် recovering system ကို မဖျက်ဆီး
စေချင်ပါဘူး။ တခါတရံ ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်နေတဲ့ ပြင်းအားကို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမထူးဆန်းသလို ခံစားရခြင်းက စိတ်ဆောင်နေလို့ အောင်နေခြင်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကတော့ မလိုက်နိုင်တော့တာ သင်ဂရုမပြုမိခြင်းပါ။
တကယ်တော့ လေ့ကျင့်မှုလွန်ကဲခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွင်သာမက၊ အအိပ်
အစား၊အလုပ်စသည့် နေ့ စဉ်လူမှုဘ၀များ အပေါ်ပါဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်နိုင်စွမ်း ရှိနေပါတယ်။(၇)
ကလေးတစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်ရှိတဲ့ အလုပ်ဖိအားများတဲ့ အသက်သုံးဆယ်ကျော် ယောက်ကျား
တစ်ယောက် အတွက်၊ လေ့ကျင့်မှု လွန်ကဲခြင်းဟာ သုတ်ပိုးနည်းပါးခြင်းနဲ့ မြုံခြင်းတို့ ကိုပါဖြစ်စေ
နိုင်ပါတယ်။(၈)ကိုယ်တွင်းမှ တခြားသော ကြွက်သား အစိတ်အပိုင်းများလိုပဲ သင့်သာမိုမီတာဟာလည်း
သွေးလည်ပါတ်စီးဆင်းမှုကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။သင့်သာမိုမီတာ အကြိမ်ကြိမ် ကောင်းမွန်စွာ ထောင်မတ်
နိုင်စွမ်းဟာ သင့်နှလုံးသွေးလည်ပါတ်မှု စနစ်တွေ ကောင်းမွန်နေသေးတယ် ဆိုတာပြသတာပါပဲ။အကယ်၍
သာမိုမီတာ အားနည်းနေပြီဆို၇င် မကြာခင်မှာပဲ သင်နှလုံးနှင့်ပါတ်သက်သော ပြသနာများကို ခံစားရနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါပြီ။(၃၊၉၊၁၀)ထို့ အတူပဲ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ လည်း သင့်တင့်မျှတတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစားကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။(၁၄)လေ့ကျင့်ခန်း စတင်ပြုလုပ်မည်ဆိုလျင် ခပ်ရွရွလေးပြေးခြင်း၊ လမ်းလျောက်ခြင်း
စသော အနေအထားမျိုးမှ တဆင့်တဖြည်းဖြည်းခြင်းသာ လေ့ကျင့်ခန်း၏ ၀န်ကိုတိုးသွားသင့်ပါသည်။သို့ မှသာ
လေ့ကျင့်ခန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သော ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ နှင့်အ၀လွန်ရောဂါများမှ လွတ်ကင်းနိုင်ပါမည်။(၁၂)ယေဘူယျအားဖြင့် အသက်အရွယ် ရလာသည်နှင့်အမျှ မနက်စောစော သာမိုမီတာထောင်မတ်နိုင်စွမ်းများ ကျဆင်းသွားနိုင် သော်လည်း သင့်လေ့ကျင့်ခန်း ပမာဏ အာဟာရနှင့် အနားယူမှုမျှတနေမည်ဆိုလျင် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သာမိုမီတာ ထောင်မတ်နိုင်စွမ်းကို သင်ပြည့်ပြည့်၀၀ ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေး အတွက်ကောင်းသော်လည်း ***မွှေးလွန်းက အီတတ်၏
***ဟူသော ဆိုရိုးအတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်က လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည့် ပမာဏထက် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်မိလျင်တော့
ရလာဒ်ကောင်းများ မှ လွဲချော်သွားနိုင်သည်ကို မမေ့သင့်ပါ။(၁၅)
လိုတိုရှင်း ပြောရလျင် ဤဆောင်းပါးမှ ကျွန်တော်ပေးချင်သော မက်ဆေ့မှာ-
-ဘ၀တွင် အရေးအကြီးဆုံး အချက်မှာ ကျန်းမာခြင်း health ပင်ဖြစ်သည်။
-ထို့ နောက် တွင်မှသာ fitness &strength အရေးပါလေသည်။
-Health အတွက် fitness အရေးပါသော်လည်း၊Fitness အတွက်တော့ Health ကိုမစတေးသင့်ပါ။
-ကာယဗလ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဖော်ပြနေကြသည့် Hardcore ဆိုတာကို ခဏမေ့ဖြစ်အောင်မေ့ထားပါ။
-လူတစ်ယောက်နှင့် တယောက်ခံနိုင်ရည်ခြင်း လုံးဝမတူညီသည့် အတွက် လူတစ်ယောက်အတွက်
သွေးပူလောက်သာ ရှိသော ကစားသည့် ပမာဏသည် အခြားသော သူတစ်ယောက် အတွက်မူ
ထိချက်ပြင်းသည့် stress တခုဖြစ်သွားနိုင်သည်ကို ဂရုပြုပါ။
-လူအတော်များများ ဂျင်မ်ကစားသည့် ရည်ရွယ်ချက် ကိုအတိအကျ သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ကျန်းမာ
ရေးအတွက် ကစားသူသည် မောင်ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူ ကဲ့သို့ မည်သည့် အခါမျှ မလေ့ကျင့်သင့်ပါ။
-ယနေ့ ခေတ် ဖိအားများ သက်ရောက်မှုများသည့် လူနေမှုဘ၀ပုံစံ ကိုရင်ဆိုင်နေရသည့် အမျိုးသားများ
အများဆုံး တွေ့ ကြုံရသည့် ပြသနာမှာ လိင်မှုဝေဒနာများ ပင်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့် မိမိတို့ ကျားမာန်
အစဉ်အမြဲ ထက်သန်ပြည့်ဝ နေစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ရာတွင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ၏ အကူအညီ
လိုအပ်သလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အသိပညာများ ဆည်းပူးလေ့လာထားသင့်ပါသည်။
ကျွန်တော် တင်ပြလို သည့် အချက်များကို Research အဖြစ်တွေ့ ရသည့်အတွက် မလိုအပ်သည်များကို
ချန်လှပ်ရင်း မူရင်းလည်းမပျက်စေ၇န် ဆောင်းပါးအဖြစ် ကြိုးစား တင်ဆက်ပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဖတ်ရသည့် အရသာ တမျိုးဖြစ်နေပါက ကျွန်တော်၏ တင်ပြပုံလိုအပ်ချက်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း-
1. Blum et al. Sex, drugs, and rock 'n' roll: hypothesizing common mesolimbic activation as a
function of reward gene polymorphisms. J Psychoactive Drugs. 2012 Jan-Mar;44(1):38-55.
2. van Driel. "Sleep-related erections throughout the ages." J Sex Med. 2014 Jul;11(7):1867-75.
3. Hirshkowitz and Schmidt. "Sleep-related erections: clinical perspectives and neural
mechanisms." Sleep Med Rev. 2005 Aug;9(4):311-29.
4. Evans et al. "Concentrations of plasma testosterone in normal men during sleep." Nature.
1971 Jan 22;229(5282):261-2.
5. Granata et al. "Relationship between sleep-related erections and testosterone levels in men."
J Androl. 1997 Sep-Oct;18(5):522-7.
6. Koyanagi et al. "REM sleep determined using in utero penile tumescence in the human fetus
at term." Biol Neonate. 1991;60 Suppl 1:30-5.
7. Brooks and Carter. "Overtraining, Exercise, and Adrenal Insufficiency." J Nov Physiother.
2013 Feb 16;3(125).
8. du Plessis et al. "Is ThereaLink between Exercise and Male Factor Infertility?" Open Repro
Sci J 2011, 3, 105-113 105.
9. Karacan et al. "Erectile dysfunction in hypertensive men: sleep-related erections, penile blood
flow and musculovascular events." J Urol. 1989 Jul;142(1):56-61.
10. Rastrelli et al. "Impaired masturbation-induced erections:anew cardiovascular risk factor
for male subjects with sexual dysfunction." J Sex Med. 2013 Apr;10(4):1100-13.
11. Simon et al. "The Association of Exercise with Both Erectile and Sexual Function in Black
and White Men." J Sex Med. 2015 Mar 20.
12. Tommy Wood, The Great Upside-Down Movement Pyramid, Breaking Muscle UK
13. Veldhuis et al. "Amplitude suppression of the pulsatile mode of immunoradiometric
luteinizing hormone release in fasting-induced hypoandrogenemia in normal men." J Clin
Endocrinol Metab. 1993 Mar;76(3):587-93.
14. Leproult and Van Cauter. "Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in
young healthy men." JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2173-4.
15. Spiegel et al. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. Lancet. 1999 Oct
အဆီချလိုသူတို ကြားက အယူအဆမှားတခု
Muscle professor page သို့ မက်ဆေ့ပို့မေးမြန်းလာသော မေးခွန်းများကို တစ်ဦးချင်းစီ ဖြေကြားသည်ထက်ဆောင်းပါအဖြစ် ဖန်တီးကာ တင်ဆက်ပေးမည် ဆိုပါက အများအတွက် အကျိုးပြုမည်ဟု မျှော်လင့်သည့်အတွက် မေးထားသမျှသော မေးခွန်းများထဲမှ အယူအဆ အလွဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုယခုကဲ့သို့ ခုချင်းစီကို ဆောင်းပါးပြုလုပ်ကာ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးလိုက်ပါသည်။တခ
ုမေတ္တာရပ်ခံ လိုသည်မှာမေးခွန်းများ ဖြင့်အကြံဥာဏ်များ တောင်းဆိုလာသော မိတ်ဆွေများသည် မိမိတို့ မေးလိုသည့် အကြောင်းအရာသည် ဤပေ့ခ်ျတွင် တင်ဆက်ထားဖူးခြင်း ရှိမရှိကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပြီးမှ မေးမြန်းစေလိုပါသည်။ဤပေ့ခ်ျတွင်အကြောင်းအရာအတော်များများကို ထောင့်စုံေ
ရးသားတင်ဆက် ဖူးသည့်အတွက် ဤပေ့ခ်ျကိုLike လုပ်ထားခြင်းဖြင့် သင်သိလိုသော အကြောင်းအရာ များကို အလွယ်တကူ သိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဗယ်လီ လေ့ကျင့်ခန်း များကို ဦးစားပေး လွန်းခြင်း
အဆီချ လိုသူ အယောက်တစ်ရာလျင် ကိုးဆယ့်ငါးယောက်ခန့့်ဤအမှားကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်နေခဲ့
ကြပြီး လက်ရှိလည်း ပြုလုပ်နေကြဆဲ အမှားတစ်ခုမှာ ဂျင်မ်ရောက်လျင်ရောက်ခြင်း သွေးပူလုပ်ပြီးသည်
နှင့် ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းများကို တခုပြီးတခု မမောတမ်း မပန်းတမ်း ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။
အနည်းဆုံး တစ်နာရီ တစ်နာရီခွဲ လောက်ကြာမှ ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားအုပ်စုကြီး များကို စတင်လေ့ကျင့်
လေ့ရှိသည်။ WHY ? ဘာကြောင့်နည်း? ဖြေပေးကြပါ။လုံးဝမှားသည့် အယူအဆပါ။ထိုအယူအဆ၏
လွဲမှားပုံကို အနည်းငယ် ဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်။
-ထိုသို့ ပြုလုပ်ရသည့် အယူအဆ၏ နောက်ကွယ်တွင် အဆီအများစုသည် ၀မ်းဗိုက်တွင် စုနေသည့် အတွက်ဝမ်းဗိုက် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပါကအဆီကျမည်ဟူသောမရေရာသည့် မျှော်လင့်ချက်
ဤအယူအဆ သည်လုံးဝ မှားသည့် အပြင် သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား မရှိပါ။ထိုသို့ ပြုလုပ် ခြင်းကို
တနေရာတည်း ကွက်၍ လျော့ချခြင်း spot reduction ဟုခေါ်သည်။ ဗယ်လီလေ့ကျင့်ခန်း များသည် ဗယ်လီကြွက်သားများ ကြီးထွားစေရန် အတွက် အသုံးဝင်သည် အသေအချာ ပင်ဖြစ်သော်လည်း သင့်ဗယ်လီ ကြွက်သားသည် မည်မျှပင် ကြီးထွားလာ စေကာမူ အရေပြား နှင့်ကြွက်သားကြားတွင် အဆီထုထည် ခံနေပါကသင့်ဗယ်လီ ကြွက်သားများကို လုံးဝမြင်ရမည် မဟုတ်ပါ။ ဒါဆို သင့်ဗယ်လီ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး အဆီရှိနေသရွေ့သင့်ဗယ်လီ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှာ မဟုတ်တာကို သင်ရှင်းရှင်း သိလောက်ပြီဖြစ်သည်။
-၀မ်းဗိုက်ကြွက်သား များကို ပထမဦးစွာ လေ့ကျင့်ခြင်း၏ နောက်ထပ် စောဒက တစ်ခုမှာ၊ဗယ်လီလေ့
ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှုများပြီး အဆီကျမည်ဟု မျှော်လင့်၍ ဖြစ်သည်။
ထပ်မံ ဆွေးနွေးကြည့် ကြပါစို့ ။ဗယ်လီ လေ့ကျင့်ခန်းများသည် အလွန်နည်းပါးသော အတိုင်းအတာ
တခုအထိသာ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်း စေနိုင်ပါသည်။အဘယ်မျှ နည်းပါးသည်ကို တင်ပြရသော်
သင်လေ့ကျင့်သည့် Crunch ဗယ်လီလေ့ကျင့်ခန်း အကြိမ်နှစ်ရာ အတွက် လောင်ကျွမ်းမည့် ကယ်လိုရီ
ပမာဏသည် အလေးထမ်း ထိုင်ထ ဆယ်ကြိမ် တစ်ကျော့ လောက်ကိုတောင် မမှီနိုင်ပါ။ကဲ အချိန် အင်အား
အသုံးပြုမှု မည်မျှ ကွာခြားသည်ကို သိနိုင်လောက်ပြီ ထင်ပါသည်။ထို့ ထက်ထူးသည်က အလေးထမ်းထိုင်ထပြုလုပ်လျင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု အတွက် အရေးပါသော တက်စတိုစတီရုန်း ဟိုမုန်းထုတ်လွှတ်မှု အားကောင်းစေနိုင် သော်လည်း ဗယ်လီလေ့ကျင့်ခန်းများ တွင်မူ ဤအကျိုးကျေးဇူး နထ္တိပင်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင့်အနေနှင့် အလေးနှင့် လေ့ကျင့်သည့် anaerobic လေ့ကျင့်ခန်းများကိုမရွေးချယ် လိုလျင်လည်း aerobic လေ့ကျင့်ခန်း များဖြစ်သည့် ခပ်ရွရွပြေးခြင်းလမ်းလျောက်ခြင်းကြိုးခုန်ခြင်းတို့ ကိုငါးမိနစ်ခန့် ဖိဖိစီးစီး ပြုလုပ်လျင် လောင်ကျွမ်းမည့် ကယ်လိုရီ ပမာဏသည်သင်စွဲလန်းရူးသွပ် သောဗယ်လီအကြိမ် နှစ်ရာထက်ပို၍ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်း စေနိုင်သည်က အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ဗယ်လီ လေ့ကျင့်ခန်းများကို မဖြစ်မနေ လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။ သို့ သော် အဓိက လေ့ကျင့်ခန်းများပြီးမှသာ လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။အဓိကနှင့် သာမည ကွဲပြားစေချင်ပါသည်။
-အချို့ သော သူများ အတွက် Spot reduction သည် အသုံးဝင်ပါသည်။မည်သူများ အတွက်ပါနည်း။
ကာယဗလ ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူများ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကြွက်သားထုထည် တင်ပြီးနောက် မာဆယ်ခွဲလိုသူများ
ထိုသူများသည် ကိုယ်တွင်းအဆီ ပမာဏသည် ယေဘူယျ အားဖြင့် ၁၅% ထက်ကျော်မနေ တတ်ပါ။ထို့ 
အပြင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် လေ့ကျင့်ခန်း အစား အအိပ်တို့ စနစ်ကျသည့် အတွက် ထိုမျှသော ပမာဏ
လောက်ရှိသည့် အဆီသည် ၄င်းတို့ အတွက် ကစားစရာ ပင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ထို့ ကြောင့် အ၀လွန် အဆီချလိုသူများသည် ထိုကဲ့သို့ သော အားကစား သမားများကို လုံးဝ အတုမယူသင့်ပါ။
-သမားရိုးကျ ဗယ်လီ လေ့ကျင့်ခန်းများ ၏ Risks များကိုလည်းမမေ့သင့်ပါ။အ၀လွန်သူတစ်ယောက်အတွက်
သမားရိုးကျ ဗယ်လီလေ့ကျင့်ခန်း များသည် အဘယ်မျှ ပင်ပန်းခက်ခဲသည်ကို ကိုယ်တိုင် ဖက်တီးမဖြစ်ဖူး၍
မသိသော နည်းပြများ အနေနှင့် လေ့လာသင့်ပါသည်။ကစားသမား အနေနှင့်လည်း မိမိအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေသည့် သာမန်ထက်ပို၍ ပင်ပန်းသည့် လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို နည်းပြဖြစ်သူအား ပွင့်လင်းစွာ ပြောပြ၍သင့်လျော်သော လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခု အစားထိုး ရွေးချယ်ခိုင်း သင့်ပါသည်။သို့ မှသာ မညီးမငွေ့ ဘဲစိတ်ပါ လက်ပါ လေ့ကျင့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။risks များကို ဂရုမမူပါက ခါးနာခြင်း ပေါင်အပေါ်ပိုင်း မျက်ခြင်းများကို ကြုံတွေ့ ရနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ-နေထွက်ပြီးရင် နေ၀င်မယ်။မွေးပြီးရင် သေမယ်ဆိုတာ လောက်သာ
အမြဲတမ်း အမှန်တရားပါ။အခုခေတ်မှာ အရာရာ ဟာပြောင်းလဲနေပါတယ်။သမားရိုးကျ ဗယ်လီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှသာ ဗယ်လီပေါ်မယ် ဆိုတာ အမြဲတမ်းအမှန် တရားမဟုတ်သလို ဘုရားဟော မဟုတ်တာလည်းဂရုပြုပါ။အသားသေနေ သော အလွဲများမှ ရုန်းထွက်ပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်းကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုရင်း နောက်ထပ် မြန်မာဖစ်တနက်စ် နယ်ပယ်ထဲမှ အယူအဆ အလွဲလေးများကို တင်ပြ ပေးသွားပါဦးမည်။
Trainer အတွက် ( ၁၅ ) ချက် --အပိုင်း ၁
နည်းပြအကြောင်းဆောင်းပါးတွေရေးရတာအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းလူမုန်းခံသမားကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ်တွေကတော့ဘယ်သူကိုမှရည်ရွယ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးသားဖို့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ဒါပေ့မယ်လည်းဆောင်းပါးပါအချက်အလက်တစ်ချို့ကနည်းပြတစ်ချို့အတွက်တီကောင်ဆားထိသလိုတွန့်ခါသွားစေတာတော့တစ်လောကကျွှန်တော်တို့တစ်တွေရေးလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ချို့ကသက်သေပြနေပါတယ်။ဒါပေ့မယ်တစ်ခုမေးချင်ပါ တယ်Gymလောကထဲမှာကျင်လည်တယ်ဒါနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတယ်။နည်းပြဆိုတဲ့ရာထူးကိုလည်းရထားတယ်။နည်းပြတစ်ယောက်လေ့လာသင့်တဲ့အရာလေ့လာသင့်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့လာဖို့အချိန်ပေးရဲ့လား မိမိလေ့လာမိသလောက်ကိုရော ဒီလောကထဲက ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိစေတနာပါပါ ချပြ ပြီးပြီလဲ ။ရေးသားပေးဖို့ဆန္ဒရှိလား လေ့လာနေတုန်းပဲလား။ကျွှန်တော်တို့လိုမပြည့်စုံတဲ့လေ့လာစဲအဆင့်လို ၀ါသနာရှင်တွေတောင် ဒီလောကကိုအကျိုးပြုဆောင်းပါး၄၀၀နီးပါရေးသားပြီးချိန်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထဲထဲဝင်ဝင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု နေသူတွေကို ပြောချင်ပါတယ် ရေးပေးကြပါ။လေ့လာချင်သူတွေ အများကြီးပါ မြန်မာပြည်မှာ လက်တွေ့ကျကျ သမားဆိုသူတွေ မရေးသေးလို့ ကျွန်တော်တို့ စာတွေ့သမားတွေ အရှေ့ထွက်နေတာပါ တကယ်ရေးကြည့် လိုက်ပါ တကယ်အားပေးမဲ့သူတွေအများကြီးပါ။မရေးနိုင်သေးဘူးလား အေးဆေးအားပေးပါ ကိုယ်လမ်းကိုယ်လျောက်နေပါတယ်ဘယ်သူကိုမှ ကျွှန်တော်တို့အဆွယ်တရားမဟောပါဘူး Gym လည်း မဖွင့်ထားပါဘူး။ဈေးသည်စကားနဲ့ပြောရင် ဖောက်သည်လည်း မလုပါဘူး ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့အချိန်ထိ အပြင်စီးပွားရေးသမားတွေပါ ကာယဗလနဲ့ ပတ်သက်ရင် အားဆေး တစ်တောင့်တောင် မရောင်းဘူးသေးပါဘူး။ အခုလည်း နည်းပြ တစ်ချို့ သိထားသင့်တယ်ထင်လို့ လေ့လာမိသလောက် စာတွေ့ကျကျ ဘာသာပြန်တင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးဆိုသူတွေ မဖတ်ချင်ကျော်သွားလိုက်ပါ။----ဆောင်းပါးကိုတော့ အပိုင်းခွဲမှအဆင်ပြေ မှာမို့ အပိုင်းခွဲပြီးရေးသားပေးပါ့မယ်----
(၁ )။Effective Use of personal တစ်ဦးချင်းအရည်အသွေးကို စွမ်းအားပြည့် ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်အသုံးချ မှုစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ တပည့်တစ်ယောက်မှာ အခြားတစ်ယောက်နှင့် မတူတဲ့ ပင်ကိုဗီဇ ပါရမီဓာတ်ခံပါရှိပြီးသားပါ။ထိုဗီဇအားသာမှုများကိုအခြေခံ၍ သူနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် နည်းစနစ်ပိုင်း များကို နည်းပြတစ်ယောက်အနေနှင့် အံဝင်ခွင်ကျပြသနိုင်သည့်အစွမ်းရှိရမည်။အသုံးချတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ထို မှသာ အနာဂတ်အတွက် အလွန်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သည့် အားကစားသမားကောင်းကိုမွေးဖွားနိုင်သလို မိမိလည်း နည်းပြကောင်းတစ်ယောက်အဇြစ်သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ပြိုင်ပွဲပိုင်းဆိုင်ရာအနေနှင့်လည်း မိမိ တပည့်တစ်ယောက်သည် မည့်သည့်ပြိုင်ဘက်နှင့်တွေ့စေအုံးတော့ အရည်အသွေးကို အသုံးချ၍ နည်းစနစ်ကျ ကျလေ့ကျင့်ထားလျင် မိမိဘက်ကကိုယ့်တာ ကိုယ်လုံနေမည်ဖြစ်သည်။
(၂)။Concern for the atheletes မိမိလေ့ကျင့်ပေးနေသည့်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဧ။် အခြေအနေအရပ် ရပ်ကို ဘ၀ပေးအခြေအနေကို အသေးစိတ်သိနားလည်ရန် မေးမြန်းထားသင့်သည်။အတွင်းကျကျ လှုမှုရေးအ ခြေအနေမဟုတ်တောင်မှ မိမိသင်ကြားပြသပေးသည့်တပည့်သည် ကျောင်းသူကျောင်းသားလား ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းလားဆိုတာကိုသိထားလျင်လေ့ကျင့်မှုအချိန်ဇယားကိ်ုသင့်တော်သည့်အချိန်ရေးဆွဲပေးနိုင် ခြင်းဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုလျင်ကျောင်းချိန်မထိခိုက်စေသလိုဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကလည်းရုံးချိန်လွတ်သည့်အချိ်န်ကိုလေ့ကျင့်စေခြင်းသည့်သင်တန်းသားအနေဖြင့်လေ့ကျင့်မှုတွင်အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာဖြင့်ပြည့်ပြည့်၀၀အားစိုက်အသုံးချနိုင်သလိုထိေ၇ာက်သောလေ့ကျင့်မှုလည်းဖြစ်နိုင်မည်။နည်းပြဆ၇ာ ကောင်းဖြစ်လိုသူများသည် မိမိသင်ကြားပြသပေးနေရသူ၏ ပကတိဘ၀အခြေအနေကိုနှင့်ဘ၀ဖြစ်စဉ်များကို သိရှိလေ့လာထားခြင်းဖြင့်ရှဉ်လည်းလျောက်သာပျားလည်းဆွဲသာသဘောမျိုးဖြင့်မြွေမသေတုတ်မကျိုးကိုင် တွယ်လေ့ကျင့်ပေးကြရမည် ဖြစ်သည်။
( ၃ )Ability to teach ဆိုလိူသည်မှာ နည်းပြတစ်ယောက်သည် သင်ကြားပြသမှုအပိုင်းတွင် အရည်အချင်း ပြည့်ဝမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။သို့မှသာ Effective run practice ဆိုသည့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်လုပ်ဆောင်မှုများ အပေါ်ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။နည်းပြဆရာကောင်းတိုင်းတွင် Knowledge of training Method ခေါ် သည့် လေ့ကျင့်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုပြည့်စုံနေရမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော် တို့လက်တွေ့ကြုံနေရသမျှအပိုင်းကတော့ ဆီနှင့်ရေ ပင်ဖြစ်သည်။ လက်မောင်း ရှေ့ နောက် ၏ ကြွက်သား အခေါ်အဝေါ်ကိုပင်နားမလည်သည့်နည်းပြမျိုးကြုံနေရသည်။လေ့ကျင့်မှုနည်းပညာပိုင်းတွင်ဘယ်ဖက်ကစမ်း စမ်း ညာဖက်ကစမ်းစမ်း အစမ်းခံနိုင်သူဆိုလျင် ပိုကောင်းသည်။ဆိုင်ရာတွင် ထုံးလိုချေ ရေလိုနှောက် လေ့လာထားသင့်သည်။နည်းစနစ်များကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ထားမှသာလျင် မိမိကိုယ် ယုံကြည်သော တပည့်လည်းများပြားပြီး ယုံကြည်မှုမြင့်မားကာ အောင်မြင်သောနည်းပြတစ်ယောက် အောင်မြင်သော Gym တစ်ခုကိုဦးစီးဦးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပျက်နေသာ ကာယဗလ နည်းပညာများ ကာယဗလလောကအခြေအနေများကို မျက်စိဖွင့် နားစွင့် လေ့လာထားသင့်သည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ကာယဗလလောက၏သတင်းများ နာမည်ကျော်များ၏ အခြေအနေများကို သိရှိထားသင့်သည် ထိုမှသာ ယနေ့ ခေတ်လူငယ်များ၏ မေးမြန်းစူးစမ်းမှုများကြုံလာသည့်အခါ ပါးစပ် အဟောင်းသား ဘ၀မှ ကင်းလွတ်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ကိုယ်တွေ့ တစ်ခုပြောပြရလျင် ကျွန်တော့် ကစားသည့် Gym မှ နည်းပြတစ်ယောက်သည် နံရံတွင် ကပ်ထားသော ဒိုရီယန်ရီတ်စ် ပုံကို လာကစားသည့် ကလေးငယ် တစ်ယောက်က သိလျက်မေးတာ လား တကယ် မသိလို့မေးတာလားမသိ နည်းပြက ပြန်ဖြေလိုက်သည်ကို နားနှင့် ဆတ်ဆတ်ကြားလိုက်ရသည် မှာ သူက သေသွားပြီကွ စင်ပေါ်မှာ ကြွက်တက်ပြီး သေသွားတာ သူ့နာမည်ကတော့ ငါမေ့နေပြီ အာနိုးတို့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ထဲတဲ့မှားချက်ကကမ်းကုန်ပင်ဖြစ်သည်။စင်ပေါ်သေသည်ကမိုဟာမက်ဘင်နာဇီဇာအာနိုးတို့ခေတ်လည်းမဟုတ်။ သည်အချိန်မှာကျွန်တော်သာ ဘေးက အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ ဖော်ကောင်ဘညွန့် လုပ်လိုက်လျင် ဒီ နည်းပြ အရှက်ကွဲပေမည်။ဒါမှမဟုတ် မေးသည့် ကောင်လေးက သိလျက်နှင့် ပညာစမ်းလိုသည့် သဘောနှင့် မေးပါကလည်း ပါးစပ်ကဖွင့်မပြောသည်သာရှိမည်။စိတ်ထဲကတော့ ငပေါကြီးဟု သတ်မှတ်မည်မှာ သေချာသည်။ထို့ကြောင့် နည်းပြတစ်ယောက်အနေနှင့် တတ်နိုင်လျင် မိမိထက်စီနီယာ ကျသူများ ခေတ်ပညာတတ်နည်းပြများထံမှ ကာယဗလစာအုပ်စာပေများ ရှေ့မှီနောက်မှီအဖြစ် အပျက်များ မြန်မာ့နာမည်ကျော် ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် ကာယဗလမောင်များ နည်းပညာများကို နည်းနည်းခြင်းစီ ခြ တောင်ပို့စုသလို စု၍ ပညာရှာသင့်သည်။သို့မှသာ ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ နည်းပညာများ ဗဟုသုတများ အမြဲရှင်သန်နေမည်ဖြစ်သည်။
( ၄) Motivator ခေါ် နည်းပြတစ်ယောက်သည် လှုံဆော်ရေးမှုး ဆော်သြရေးမှုးတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်ဖြစ်သည်။နေပတိုင်းသည် တနင်္ဂနွေမဟုတ်ဆိုသလိုပင် ကစားသမားတစ်ယောက်သည် စိတ်အစဉ်တစ်နေ့နှင့်တစ်နေ
့မတူနိုင်ပေ။ ကြည်လင်သည့် နေ့ရှိသလို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် စိတ်မရွင်လန်းသည့်နေ့များလည်းရှိတတ်သည်။ထိူသို့သောနေ့မျိုးတွင် တပည့်အပေါ်တွင် ချော်လဲရောထိုင် မနေပဲ ကစားချင်စိတ်ပေါက်လာအောင် နာမည်ကျော်မောင်များ အဘယ်သို့ကြိုးစားကာ အောင်မြင်မှုရရှိလာပုံ စသည်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပြောပြကာလှုံဆော်ပေးသင့်သည်။နောက်ဆုံးမရနိုင်တော့သည်အခြေအနေရော
က်မှသာအတင်းအကြပ်သဘောမျိုး မဟုတ်ပဲ အနားယူစေသည့် သဘောမျိုးထားကာ အနားယူစေခြင်းဖြင့် နည်းပြ နှင့် တပည့်အကြား မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တစ်သိုက် ဆရာဦးသာအောင်ဆီမှာ ကစားစဉ်က ကြုံတွေ့ဖူးသည်။တစ်ခါတစ်လေကျ ကစားချင်စိတ်မရှိပေ သို့သော်လည်း ဆရာ့ကို ကြောက်စိတ်ဖြင့် စိတ်မအပါတစ်ပါကစားသည်ကို ဆရာက ရိပ်မိသည့်အခါ အနားသို့ခေါ်၍ မင်း တို့ ဖတ်နေတာ ဘာစာအုပ်လဲ အာနိုး ကိုးတောင်ကျား မင်းတို့လုပ်ရပ်တွေက ဖွတ်ကျား လုပ်ရပ် ဖွတ်ကျားစိတ်ဓာတ်တွေ ကိုးတောင်ကျား ဖြစ်ချင်ရင် ကိုးတောင်ကျားလိုကျင့်ကြံကြပေါ့။ဖွတ်ကျားစိတ် ဓာတ်ကိုဘာလို့ မွေးကြတာလဲလို့ လှုံဆော် ပေးခဲ့သည် ကြိမ်းမောင်းပေးခဲ့သည်။ဆရာ့ရဲ့ စကားသံတွေကတော့ တစ်ခါတစ်ရံ နားထဲမှာ ခါးသလိုရှိပေ့မယ် စေတနာအပြည့်ပါတာတော့ အသေအချာပါဆရာ။
( ၅ ) Asastudent တစ်ခါတစ်လေ နည်းပြဖြစ်သူ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တပည့်တစ်ယောက်ကဲ့သို ကျင့်ကြံ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ မိမမသိရှိသေးသည့် ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှ Up to date အဖြစ်အပျက် တစ်ချို့ကို မိမိအနေဖြင့် ဆရာဆိုသည့် မာန်မနမထားပဲ တပည့်တစ်ယောက်ဆီမှ လေ့လာမေးမြန်းထားသင့် သည်။သို့မှသာ မိမိကဲ့သို မသိရှိသေးသူများကိုလည်း ပြန်လည်ဝေမျှပေးနိုင်သလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း နောက်ဆုံးရ အားကစားလောက၏ အဖြစ်အပျက်များကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လေ့လာပါ မှတ်သားပါ ကာယဗလအသိပညာ
ကာယဗလအားကစားကိုတစ်ချို့ကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးအရမ်းလွယ်တဲ့အားကစားလို့ပြောကြပါတယ်။ ပြောကြသူတွေကလည်းဘေးထိုင်ပြောနေရုံကလွဲပြီးလက်တွေ့ကျကျအနေနဲ့ ဒမ်ဘယ်တစ်စုံနဲ့ ၁၀ကြိမ် ၁ကျော့တောင်မကစားဘူးတဲ့သူတွေပါ။ဒါကြောင့်လွယ်ပါတယ်ပြောသူတွေကို တစ်ခါတစ်လေကျ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ခရားရေသွန်းပြောချလိုက်တဲ့အခါမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ မလွယ်ပါလားဖြစ်သွားပါတယ်။တကယ်လည်း ကာယဗလကိုဝါသနာပါရင် အာဟာရ အပိုင်း ၊ လေ့ကျင့်မှု အပိုင်း စသည်ဖြင့် သူ့အပိုင်း နှင့်သူ ဗဟုသုတ များကို ဖတ်မှတ်ပြီး ကျင့်သုံးနိုင်ရမည်။ ကာယဗလ အားကစားလိုက်စားသူ တစ်ယောက်ဟာ အခြား အားကစား သမားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် အာဟာရ အပိုင်းတွင် အများကြီး ဂရုစိုက်ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိကလိုအပ်သည်မှာ မှန်ကန်သော အာဟာရဓာတ်များကို ချင့်ချိန်နှိုင်းယှဉ်ပြီး စားသောက်တတ်ဖို့ ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလည်း ကယ်လိုရီ အ၀င်အထွက်မျှတပြီး ကြွက်သားတိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်များလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော အာဟာရဓာတ်များကို တွက်ချက်စားသောက်မှု မရှိသည့် ကစားသမား တစ်ယောက်သည် တိုးတက်မှုတွင် ကြန့်ကြာခြင်း ၊ ကြွက်သားကွာလတီ မပြည့်မှီခြင်း ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျစ်သွားခြင်း ကဲ့သို့ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ကာယဗလနယ်ပယ်တွင် အရှုံးဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်ပြီး နောက်လူများဧ။် ကျော်တက်ခြင်းကို ခံရသည် အိုပယ် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ပြိုင်ပွဲ ၀င်များလည်း ရှိပါသည်။
အာဟာရ အပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း လက်လှမ်းမှီ သလောက် ကျွှန်တော်တို့ တင်ဆက်ပေးပြီး သားများရှိပါသည်။ ကာယဗလ အားကစားသည် ကျွန်တော်အမြဲ ပြောနေကျကဲ့သို့ပင် ဘက်စုံ စည်းကမ်းရှိ သည့် ၊ အနေအထိုင်အစားသောက် ဆင်ခြင်နိုင်မှ အောင်မြင်သည့် ကာယဗလ မောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည့် အားကစားမျိုးဖြစ်၍ အမြင်လွယ်ပြီး အလုပ်ခက်ပါသည်။အောင်မြင်သော ကာယဗလမောင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဆိုလျင် လေ့ကျင့်နေရုံ နှင့်မပြီး အာဟာရ ၊ စိတ်ဓာတ် ၊ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ကာယဗလ ဗဟုသုတများကို လက်လှမ်းမှီသလောက် လေ့လာနေရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိအတွက် တိုးတက်မှု ရှိသည့့်  လေ့ကျင့်ခန်း များရွှေးချယ်တတ်မှု ၊ အာဟာရ စားသောက်မှုမှတ်တမ်း ၊ နေ့စဉ် လေ့ကျင့်မှု ဒိုင်ယာရီ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းရွှေးချယ်ပုံနှင့် အလေးဝန်အတိုင်းအတာများ၊ တစ်လချင်းစီဧ။် တိုးတက်မှု မှတ်တမ်းများ ၊ကိုယ်အလေးချိန်အတက်အကျမှတိတမ်း တို့အပြင်၊ မိမိဧ။် အားနည်းသည့် ၊ တိုးတက်မှု နည်းသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် မည့်သည် အစိတ်အပိုင်းလဲ ၊ တိုးတက်မှု နှုန်းမြန်သည့် ကြွက်သားသည် ဘယ်အစိတ်အပိုင်းလဲ ၊ မည့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့် ပြောင်းပြီး ကစားလျင် ထိရောက်မှု ရှိမလဲ စသည့် အတွေးအခေါ်များ ၊ ပရီုဂရမ် တစ်ခုကို (၃)လ အလွန်ဆုံး (၄) လထက်ပို၍ ကစားသင့် မသင့် စသည့် အချက်အလက်များကို လေ့လာမှတ်သားသင့်သလို ၊ အာဟာရ အပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မိမိသည့် တစ်နေ့လျင် အလေးဝန် ဘယ်လောက်အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့်နေသည် ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက်လိုအပ်သည် ကုန်ဆုံးသွားသော ကယ်လိုရီကို ဘယ်လို တွက်ချက် စားသောက်တတ်ရမည် အာဟာရ အချိုးအစား ကယ်လိုရီ အချိုးအစား စသည့် တွက်ချက်မှုများကိုလည်း လေ့လာ တွက်ချက်နိုင်ရန်လို အပ်သလိ်ု မှတ်တမ်း တစ်ခု ထားရှိသင့်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝေး စားသောက်ပုံ ၊ပြိုင်ပွဲနီး စားသောက်ပုံ စသည်တို့ကိုလည်း နားလည်ရန် လိုအပ်သလို ပြိုင်ပွဲ အနီးအဝေး တွင် နေထိုင်ပြုမှုပုံများကိုလည်း သိရှိထားရန် လိုသည်။ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မပြီးသေးပါ။ ပြိုင်ပွဲတွင် မိမိတစ်နှစ်ပတ်လုံး ကြိုးစားပမ်းစားဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ တည်ဆောက်ခဲ့သော ကြွက်သားများကို ပရိသတ်ဧ။် ရင်ထဲ အသဲ တွင်သာမက ဒိုင်လူကြီးများဧ။် မျက်စိတွင် စွဲကျန်နေအောင် ပြတတ်ရန်လည်း လိုအပ်သည်။ သင်သည် မည်မျှပင် ကြွ့က်သားလှပနေစေကာမှု ကိုယ်ဟန်မပြတတ်ရင်လည်း အောင်မြင်မှုဆိုတာ သင်အတွက် လက်တကမ်း အကွာမှ လှောင်ပြောင်နေပေမည်။ ထိုသို့သော အကောင်းဆုံး အရှုံးသမားများသည် ကမ္ဘာ့  ကာယလေ လောကတွင်သာမက ကျွှန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်လည်း ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။ ကြွက်သားလှပ သော်လည်း ကိ်ုယ်ဟန်ပြရာတွင် ပုံသဏန်မကျ ကို့ယို့ကားရား နိုင်သည်များကို တစ်ချို့ ပြိုင်ပွဲဝင်များတွင် တွေ့နေရပါသည်။ စင်အောက်မှ ကြည့်ရသူများဧ။် အမြင်တွင် အံ့သြမင်တက်မိရမည့် အစား တဟားဟား ဖြစ်စေသည့် ပြကွက်မျိုး ဖြစ်မနေစေရန် မိမိဧ။် အားနည်းချက်များကို ဖုံးကွယ်ပြီး အားသာသော ပြကွက်များဖြင့် ပရိသတ်နှင့် ဒိုင်လူကြီးများကို လှည့်စားနိုင်စွမ်း ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ (၆)ထပ်ကွမ်း ချန်ပီယံ ဒိုရီယန်ရီတ်စ်သည် ၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ မောင်အိုလံပီယာ ပြိုင်ပွဲ သုံးပွဲစလုံးတွင် ပရိသတ်ဧ။် ထင်ကြေးပေးမှုတွင် သူသည် မောင်အိုလံပီယာ သရဖူကို အခြား ပြိုင်ဖက်များကို လွဲပေးရမည်ဟု အားလုံးက ထင်မှတ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ဘယ်ဖက်ရှေ့လက်မောင်အိုး စုတ်ပြဲမှု ၊ ပခုံးကြွက်သား စုတ်ပြဲမှု ၊ ပေါင်ကြွက်သားစုပ်ပြဲမှု စသည့် ဒဏ်ရာဗရဗွများ ဖြင့် လနှင့်ချီပြီး အနားယူခဲ့ရသည် ။
လေ့ကျင့်မှုတွင် အလှည့်အပြောင်းများကြောင့် ထိုအချိန်က ဒိုရီယန်ကို ကျားချောင်း ချောင်းနေကြသည့် အခြား နာမည်ကျော် ပြိုင်ဘက်များကသာ အနိုင်ယူလိမ့်မည်ဟုထင်နေကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ရှောင်ရေး က အဆ်ိုးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ ရှောင်ရေးသည် ဒိုရီယန်ကို နိုင်ရဖို့ဆိုလျင် သူ့အသက်ပင် သေပလေ့စေ ရေကုန်ရေခန်း အကြိတ်အနယ် လေ့ကျင့်မည်ဟု အမြဲတမ်း ကြိမ်းမောင်းတတ်သလို ပြိုင်ပွဲနီးတိုင်း သူသာလျင် ဒီနှစ် မောင်အိုလံပီယာ သရဖူကို ရနိုင်မည်ဟု စိတ်ဓာတ်အင်အားဖြင့် တွန်းအားပေးပြီး ခြိမ်းခြောက်တတ်သည့် မောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ရှောင်ရေးသည် ရှုံးတာကိုလက်ခံပေမယ့် တတိယ ဖြစ်သွားတာကို ဘယ်တော့မှ သဘောမကျတတ်သည့် မောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။သူကိုသူ အမြဲတမ်း ပထမ သာရသင့်သည် ဟု ထင်ထားသူတွင် ရှောင်ရေး သည် ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်သည်။ သူသည် စိတ်ထဲရှိသာ ကိုပြောချင်ရာ ပြောချတတ်သည် ပြီးလျင် ပြီးရော သဘော မျိုးရှိပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတိုင်းတွင် သူအမြဲပြောတတ်သည့်က ` တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ပွဲတစ်ပွဲသာ မဲပြီး ပြိုင်တဲ့လူဆိုလို့ ထိပ်သီး ပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာ ကွှန်တော်နှင့် ဒိုရီယန် (၂) ဦးပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့တူ က ပန်းသိးနဲ့ လိမ္မော်သီးလို ကွဲပြားတယ် ကိုယ်ခန္ဓာ ပုံစံချင်းမတူသလို ကျွှန်တော်က သူထက်အများကြီးသာတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ အနိုင်ယူဖို့အသင့်ပဲ။ ဒီနှစ်မှာ ရှောင်ရေး ဘယ်လို အနိုင်ယူမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်။ စိန်ခေါ်သူ တစ်ဦး အနေနဲ့ ကတော့ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘူး။ မောင်အိုလံပီယာ သရဖူ ကို အမေရီကန် ပဲ ပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်။ ဒီပြင် မြေကို သယ်ဆောင်သွားတာ မကြိုက်ဘူး။ အမေရီကန် မြေပေါ် ပြန်ယူပြမယ့် စသည်ဖြင့် အမြဲတမ်း လေကြွားသော်လည်း ရှောင်ရေးသည် ဒုတိယ ၊ တတိယ နှင့်သာ မောင်အိုလံပီယာ ဘ၀ ကို ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ဒိုရီယန် ဆိုသော တံတိုင်းကြီးကို မကျော်လွားနိုင်ခဲ့ပေ။
ဒိုရီယန် သည် သူ့ခေတ်သူ့အခါက ပြိုင်ဖက် ကောင်းများ နှင့် ပွဲတိုင်းနွဲခဲ့ရပြီး ပြိုင်ဘက်များဧ။် မထိတထိ စကားများ ၊ မနာလိူသူများဧ။် ဝေဖန်စကားများကို မသိကျိုးကျွှံပြုကာ မိမိဧ် ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့သည် စကားပြော နည်းပြီး အလုပ်ဖြင့် လက်တွေ့ ပြတတ်သည် အောင်မြင်မှုအေ့းတွင်လည်း ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ မဖြစ် မိမိဧ။် ပေးဆပ်မှုကြောင့်သာ မိမိပြန်ရလိုက်သည့် ဆုလဒ် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် ကို လက်ကိုင်ထားတတ်ပြီး ပြိုင်ဘက်များဧ။် အခြေအနေကို အမြဲတမ်း နားစွင့်ကာ ပြုပြင်သင့်သည်များကို ပြုပြင်သည်။ သူဧ။် လေ့ကျင့်ရုံတွင် ချိတ်ထားတတ်သည့် စာတန်;တစ်ခုကတော့ 199--- Mr Olympia, Atlanta . To all the disbelievers, kiss my ass! ဆိုသည့် စာတန်း တစ်ခုသည် သူဧ။် စိန်ခေါ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ မည်မျှပင် ဒဏ်ရာရ၍ ကြွက်သား အစ်ိတ်အပိုင်း အားနည်းမှု ဖြစ်နေစေကာမှု ထို အားနည်းသည့် အစိတ်အပိုင်းကို(ဘယ်ဖက်လက်မောင်း ရှေ့သားဒဏ်ရာကြောင့် သိမ်နေ) ရှောင်ပြီး အားကောင်းသည့် ကြွက်သားကို ဦးစားပေး၍ လှည့်စားပြီး ကိုယ်ဟန်ပြတတ်ခြင်းကြောင့် မောင်အိုလံပီယာ သရဖူကို နောက်ထပ် (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သာ ကိုယ်ဟန်ပြ မပါးနပ်ပါက ဒိုရီယန် သည် မောင်အိုလံပီယာကို (၃)ကြိမ်ခန့်နှင့် လက်လွတ်ရမည်ဟု လူတိုင်းက ထင်ကြေးပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဟန်ပြ ပါးနပ်လိမ္မာဖို့သည်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အရေးပါ အရာရောက်ပြီး မိမိပြိုင်ဘက်များဧ။် အားသားချက် အားနည်းချက်များကိုလည်း လေ့လာအကဲခတ်ပါ ဘယ်လို အနိုင်ယူရမည် ဘယ်လို ကိုယ်ဟန်ပြရမည် ဆိုသည်များကိုလည်း စွဲမြဲစွာ မှတ်သားပါ။
လေ့ကျင့်မှုတွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေမည့် အရာ ၊ မိမိဧ။် ရည်မှန်းချက်ကို ပျက်ပြားစေမည့် အရာများကို ရှောင်ရှားပါ။ တစ်နှစ် မရလျင် နောက်တစ်နှစ် ကို ရနိုင်ရမည့် ဆိုသည့် ဇွဲ မျိုး ထားပြီး ပြင်ဆင်ပါ ၊ လေ့ကျင့်ပါ ။ မောင်အိုလံပီယာ ရာဇ၀င်တွင် အသက်ကြီးသည် အထိ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သော မောင်ဟောင်းများ ရှိသလို နှစ်ပေါင်း (၁၇)နှစ်အတန်ကြာ အနားယူပြီးမှ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်သည့် မောင်လည်း ရှိသည်။ အဓိက မှာ ဇွဲ ရှိပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် နည်းလမ်းဖြင့် ဆက်လက် ချီတက်နေ ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒိုရီယန် ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် အမြဲ ပြောတတ်သည့် စကားလေးတစ်ခွန်းလို ကျွန်တော် နောက်နှစ်မှာ ဒီထက် ပိုကြီးတဲ့ ခန္ဓကိုယ်နဲ့ အကောင်ဆုံးပြန်လာ မယ်ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ထားပါ။ လက်တွေ့လည်း ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တင်ဆက်သူ။ ။အောင်အောင်( လှိုင် )
ကျွန်တော်တို့ muscle professor fan page ,blog နှင့်ယခင် Myanmar fitness website ရှိကတည်းက
ကောမင့်ရေး၍တမျိုး၊အီးမေလ်းပို့ ၍တဖုံ၊မက်ဆေ့ပို့ ကာတမျိုးမေးတတ်ကြသည့်အမေးအများဆုံးသော
သို့ သောကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။သို့ သော်ထိုဗယ်လီကြွက်သားများသည်အခြားသော ကြွက်
သင်တို့ အနည်းဆုံးတစ်နေ့ ကိုဗယ်လီလေ့ကျင့်ခန်းများအားလုံးပေါင်းလိုက်လျင်အကြိမ်သုံးရာမှငါးရာအတွင်း
ပြောနေတုန်းပဲလား။ဒါဆိုတစ်ခုလက်တွေ့ ပြပါမည်။အခုချက်ချင်းသင့်ဖုန်းထဲက Youtube ကိုသွားလိုက်ပါ။
အဲဒီထဲမှာ Guinness World Record for sit ups
တာရောအလွဲကြီးလွဲနေတာသင်မြင်ရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာ့ကျော်ဂင်းနစ်စံချိန်တင်အောင်
မမြင်ရတာဘာကြောင့်လဲ?ဖြေပေးကြပါ။မှတ်ထားပါမိတ်ဆွေတို့ ။သင်တို့ ဘယ်လောက်ပဲလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်
ဆိုတာကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းတွေနဲ့ receptor တွေအကြားတောက်လျောက်စီးဆင်းနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါ
အဆီကျဖို့ ဆိုရင်ပထမဦးစွာသင့်အနေနဲ့ အဆီဆဲလ်(adipocyte)တွေကိုသွေးထဲစီးဝင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်
(Alpha-2) ဆိုတဲ့receptor နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီreceptor တွေက၊အဆီတွေကိုဖြိုချပေးပြီးသွေးထဲမှတဆင့်
ပါ။ဘီတာဝမ်း Receptor ကတော့အဆီလောင်ကျွမ်းဖို့ အားပေးနိုင်ပေမဲ့၊အယ်ဖာတူး receptor တွေကတော့
အဆီတွေဖြိုချပေးမဲ့အင်ဇိုင်းတွေထွက်ဖို့ ကိုအတားအဆီးပြုနေကြတဲ့ receptorတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆီ
ဇီဝကမ္မဗေဒရှုထောင့်ကကြည့်ရင်အမျိုးသားတွေရဲ့ ဆီးခုံတ၀ိုက်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်အတွင်းပိုင်း
အလွယ်ဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံးပြောရယင်တော့၊အဆီချချင်ယင်၊နေ့ စဉ်စားသုံးနေတဲ့ကယ်လိုရီကိုလျော့၊လှုပ်ရှားမှု
များသည့်life style ကို active life style သို့ ပြောင်းပါ။)များကိုတိုးသွားပါ။ဒါကြောင့်အကြံပြုလိုတာကသင့်ရဲ့
နေတဲ့အာဟာရပုံစံကိုပြောင်းပါ။အီကြာကွေး၊ပလာတာ life style နဲ့six pack & lean muscle mass ဆိုတာ
သင့်သွားတွေ၊အစာချေစနစ်တွေ၊အသည်းတွေ၊ကိုယ်တွင်းမှာ Acidic stage ဖြစ်နေတာတွေကို
ဆာရောဂါကိုကုဖို့ အတွက်ကိုယ်တိုင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ဆေးပညာရှင်တွေဟာ
လက်တွေ့ မကျဘူးလို့ ဘေးထိုင်ဘုပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့၊မောင်ရင်တို့ ခြေသလုံးတွေကြီးထွားလာဖို့ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်မှာအထုပ်တွေထမ်းလိုက်ပါဦးလို့ သာပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကစားသမား
ဖုန်း-၀၉၅၁၂၇၅၆၇ သို့ ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်ပါ။